I-mini Groove Deep Ball Bearings yangaphandle Ububanzi Bamamitha - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-miniature Deep Groove Ball Bearings Ngaphandle ububanzi bebanga
I-Mini-speed mini-groove ibhola ebhethweni ejulile inomphumela omkhulu
Ama-bear groove ball bearings yizona ezithwala kakhulu ekilasini lamabherethi. I-Ordinary efana ne-Xiaobian emgwaqweni ngeke ibe ngabantu abaningi abangabheka, kodwa lokhu okujwayelekile okudlala indima akuyona into evamile, namhlanje sikunikeza ibhethri ejulile ye-groove ibhola ebhekene nelungu lale nkalo. I-deep groove ball bearings ebangeni lobubanzi obungama-26mm ngaphansi kwezinto ezibizwa ngokuthi yi-high speed speed micro-depth groove ball bearings, ubude obuyi-26mm buyingxenye yeminwe nje ngakho. Ekufakweni kwesikhathi esitholakalayo lapho umshini wokunyathelisa uzoba ngowokuqala ekucindezelekeni kwe-shaft, phambanisa umbuthano we-metal assembly casing kungenza indandatho yangaphandle yokuthwala futhi ithwale isihlalo sobukhosi ngendandatho yangaphakathi kanye ne-shaft enobudlova lapho ukuthwala ingcindezi Emgodini wokuthwala, isakhiwo se-casing lapho isidingo sokubambisana ngaso sonke isikhathi ukucindezela ukubhekwa komzimba ngaphakathi nangaphandle. Nakuba amakhono amancane kakhulu amancane, lesi sici esincane esithuthuthu kodwa siyingxenye ebaluleke kakhulu!
I-groove ebhodini elijulile elithinta indlela yokwenza isikhathi eside? Singakwazi ukuthuthukisa amandla okuthwala Umthwalo wethonya ekubhekeleni uxhomeke ekutheni umthamo we-rotor kanye nokusekela ukusekela ukuguquguquka, ukwandisa ukusekelwa kwezimo ezithintekayo, kuzonciphisa umthelela emithwalweni yokuthwala. Ngakho-ke, ubukhulu obufanele bephepha le-rubber linganezelwa phakathi kwezindlu zokuphatha kanye nohlaka lokusekela ukuze kuthuthukiswe ukuxhaswa kokusekela okuhambisanayo. Ngenxa yokwengeza ipuleti yerabha, ukunyuka kwezimo eziguqukayo, okubamba iqhaza le-vibration energy, ukuthuthukisa isimo sokusebenza, ukufeza injongo yokukhulisa impilo yokusebenza.
Ama-bear groove ball bearings azophinde azalwe, uma kuthwala iziphambeko ezilandelayo, ukubheja ngeke kusetshenziswe, isidingo sokufaka esikhundleni sezintambo ezintsha. Kungaphakathi nangaphandle kwendandatho, umzimba oguqayo, noma yikuphi ukuphazamiseka ekuqhekekeni; indandatho yayo yangaphakathi nangaphandle, ukugeleza kwanoma yiliphi elinye elakhiwe; ubuhlanga bayo, izimbambo, ukubhoboza ukulimala okuphawulekayo kwekhadi; I-cage yayo igqoke noma i-ripple ebukhali; umjaho we-raceway, ukugqwala komzimba nezibazi; ukugoqa phansi, umzimba ohambayo unesidakamizwa esibalulekile kanye namamaki; ububanzi bendandatho yangaphakathi noma ububanzi kwi-Plate yokufaka uphawu futhi ipuleti yesihlangu lilimaza kakhulu.
Ama-bear groove ball bearings angenziwa lula, ibhola elilodwa elilodwa eliphakathi kwebhola elibhebhethekayo lingakwazi ukumelana nomthwalo we-radial ne-axial, futhi uvumele isivinini esikhulu. Ama-deep groove ball bearings awahlukanisi. Ukufakwa kwezingqwembe ezijulile ze-ball grooves kungenasondlo futhi kungenza kube lula ukuhleleka. Njengoba i-ball deepness ball bearings ikhono lokuzihlanganisa lilinganiselwe, ngakho-ke isidingo sokuthwala ukuhlala esihlalweni sobuhle sihle, ukugxila kuyoba nomthelela ekulinganeni kokusebenza, kwandise ukucindezeleka, ngaleyo ndlela kufinyelele ukuphila okubhekene nakho. I-deep groove ball bearings ingavumela kuphela i-angle encane ye-deflection, ebuye ixhomeke kubukhulu bomthwalo. Ama-deep groove ball bearings asetshenziswe kakhulu ezinhlobonhlobo zezicelo.